Sketching Nhau: Iyo Yakafananidzwa Synthesis Yepakutanga Nyaya - Iyo Asina Mvumo
Sketching Nhau: Iyo Yakafananidzwa Synthesis Yepakutanga Nyaya
Iyo UnCommission iri kuunza pamwechete mazana evechidiki munyika yese kuti vagoverane zviitiko zvavo pachavo nesainzi, mainjiniya, tekinoroji uye kudzidza kwemasvomhu kubatsira kubatsira ramangwana reSTEM dzidzo. Isu tinokudzwa kuti vangangoita mazana maviri vechidiki vakasarudza kugovera yavo STEM nyaya nesu kusvika zvino.
Isu tinofara kugovera iyo ine mifananidzo yakagadzirwa nemuimbi Tamba Steinberg yedzimwe dzenyaya dzekutanga dzatakagamuchira. Nyaya dzinomiririrwa mumufananidzo uyu ndedzevechidiki vanobva kunharaunda dzinonyanya kubviswa kubva mukudzidza kweSTEM, iyo inosanganisira nharaunda dzeVatema, Latinx / Hispanic, uye Native America, uye vane zviitiko zvatiri kutarisisa mukuita uku. Ava vatauri vengano, zvakadaro, vanhu vakasiyana vane ruzivo rwavo uye maonero ekudzidza kweSTEM. Nyaya dziri mumufananidzo uyu dzinomiririra zvakasiyana-siyana zvezviitiko izvo vechidiki vangave nazvo munzendo dzavo dzeSTEM dzekudzidza kubva pakuda kuziva, mufaro, uye kufara kusvika pakutyisidzira, kusakendenga, uye kunyange dzimwe nguva rusarura. Kazhinji, zvizhinji zveizvi zvakasiyana-siyana zviitiko uye manzwiro anobuda munyaya imwe chete.
Tichave tichienderera mberi kuunganidza nyaya kuburikidza naGumiguru 15, 2021. Iwe uri (kana iwe unoziva) wechidiki anoda kugovana zviitiko zvavo chaizvo muSTEM kudzidza muUnited States? Dzidza maitiro ekugovana yako nyaya pano. Vese vatengesi venhau vanogashira chinongedzo chekusarudza chipo chakakosha $ 25 sekutenda.
Verenga nyaya dzinomiririrwa mumufananidzo uyu:
"Kuziva Kumiririra" naArsima
"Denise's 12-K Nyaya" naDenise
"STEM Yakachinja Dzidzo Yangu" naBrandon
"Nyaya yaRenee" naRenee
"Kudzidza chaiko-kwepasirese kunogona kuvandudza STEM kudzidziswa kwevadzidzi" naRhea
"Nyaya yaDani" naDaniela
(Cherekedza: Uyu mufananidzo unobva padudziro yemunyori yezvinyorwa zvinyorwa zvakawanda
uye haina kuitirwa kuti uve mufananidzo wemumwe muridzi wenyaya.)